Android P May Gadziriso Inosanganisira 30 Security Patches | Linux Vakapindwa muropa
Google yakakanda zuro chibatiso chigamba Android-P inoenderana naMay 2019. Iyo chigamba chine mazinga 2019-05-01 uye 2019-05-05, ayo ane huwandu hwese makumi matatu ezvigadziriso zvinogadzirisa zvikanganiso zvekuchengeteka mu Android Sisitimu, Midhiya Chimiro, iyo Android system, zvikamu zve kernel uye zvikamu Nvidia, Broadcom uye Qualcom. Pakati pezvinhu zvataurwa pane zvakare zvigadziriso umo zvisiri zvekuvhura sosi. Mazhinji ekugadzirisa ndeezvinhu zvidiki.
Chipfuva chakakomba chavakagadzirisa kushushikana kwakanyanya muMultimedia sisitimu iyo inogona kubvumidza mushandisi ari kure kuti ashandise rakasarudzika faira ku ita kodhi yekumanikidza mumamiriro ehurombo. Kuongororwa kwekuomarara kunoenderana nemhedzisiro yekushandisa kusagadzikana kunogona kuve pane chakakanganiswa mudziyo, zvinoreva kuti kukanganisa uku kuri nyore kushandisa.
Android P inogamuchira May 2019 chengetedzo yekuvandudza
Kunge zvakawanda zvinoburitswa, kuvhurwa uku kuri kuita zvishoma nezvishoma, zvinoreva kuti haizosvika kune vese vashandisi panguva imwe chete. Wekutanga kuigamuchira, uye avo vanofanirwa kunge vatove nayo, ndivo varidzi vechigadzirwa cheGoogle, pakati pedu tine iyo Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 uye Pixel 3 XL. Varidzi veEssential Runhare vanozovewo pakati pevane rombo rakanaka. Vamwe vese vanofanirwa kuve nemoyo murefu zvishoma.
Iyo yekuvandudza ichauya kuburikidza neOTA, ndiko kuti, inogona kuvandudzwa kubva pachigadzirwa chimwe chete. Vashandisi vane Android P chishandiso vanorayirwa kuti vatarise kana iyo yekuvandudza yatove yakaoneka uye nekuiisa nekukurumidza sezvazvinogona. Tinogona kugara tichifunga kuti "hazvingandibata" asi, tichifunga kuti kutadza kwakanyanya kunogona kushandiswa kure, chinhu chakanakisa kupora.
Wakatogamuchira iyo yaMay kuchengetedzeka yekuvandudza yeApple P?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android P May yekuvandudza inosanganisira makumi matatu ekuchengetedza maratidziro
Microsoft yakazivisa WSL2 neyakajairwa Linux kernel
Vanokunda veVakadzi muOpen Source Mipiro 2019